Na a slurry mgbapụta na impeller na n'ime casing na-mgbe niile gụrụ slurry na a ga-echebe ya dabere megide eyi. "Nhọrọ nke ihe maka impeller na casing dị oke mkpa dị ka nhọrọ mgbapụta n'onwe ya!" E nwere ọnọdụ atọ dị iche iche nke na-eyi uwe na slu ...
Impeller bụ rotor, na-agbanwe agbanwe nke mgbapụta centrifugal. N'ihu na azụ shrouds nwere mgbapụta si vanes na belata recirculation na akara ofufe. Igwe siri ike na ihe elastomer kpụrụ akpụ gbanwere kpamkpam. Igba na impeller eri achọ dịghị inserts ma ọ bụ akụ. Elu arụmọrụ ...
Mgbe pumping abrasive slurries ọ bụghị a ajụjụ nke ma ọ bụrụ na ị ga-mkpa slurry mgbapụta ọnwụ sọ na-eyi akụkụ - ọ bụ ajụjụ nke mgbe. Site na sistemu jikọtara ya na otu ụzọ esi eweta ngwọta anyị na-eme ka ngwa ahịa, nkesa na ntinye nke slurry pump parts na spares dobe ka ...